Joogteynta Caalamka - VANTAGE | Iskuulada Dadweynaha Minnetonka
Ardayda waxay kudhaqmaan waayo-aragnimo adduun-weynaha ee laxiriira joogtaynta aduunka. Waxay wax ku bartaan kuna koraan meelaha bixiya shaqooyinka mustaqbalka sida waaritaanka shirkadda, sayniska cuntada, amniga cuntada, amniga cuntada, nidaamyada biyaha, nidaamka qashinka, ilaalinta tamarta iyo kuwa kale. Koorasku wuxuu isku daraa cilmiga jirka, cilmiga bayolojiga iyo cilmiga macluumaadka barashada deegaanka iyo dhaqaalaha adduunka.
Ardayda waxay ku qaataan labada Semistar iyagoo ka shaqeynaya dhowr mashruuc oo warshado wadata, xallinta dhibaatooyinka cilmi baarista iyo barashada dhibaatooyinka iyo abaalmarinta shaqada mashruuc ku saleysan. Waxay sidoo kale bartaan dhaqaalaha iyo saameynta siyaasadaha ee joogtaynta cunnada, iyadoo xoogga la saarayo nooca caalamiga ah ee wax soo saarka cunnada iyo saameynta ay ku leedahay bulshada iyo deegaanka. Barnaamijkan waxaa lasiiyaa dhalinyarada iyo waayeelka.
Daraasadaha Caalamiga ah iyo Dhaqaalaha (hal dhibic ee Daraasadaha Bulshada)
Sayniska Deegaanka ee AP (hal maado oo laga doorto sayniska)